Isamsung yenza usuku olungasetyenziswanga ngokusemthethweni kwiGlass Note 9 | Iindaba zeGajethi
Kwaye kukuba kwiintsuku ezininzi ngoku, ukusondela komsitho "ongapakiswanga" kwimodeli entsha yeNqaku, iGreen Note 9, kuye kwaxelwa kwaye namhlanje uninzi lweendaba ezizodwa zifumene isimemo kulo msitho. izakubanjelwa kwisiXeko saseNew York nge-9 ka-AgastiOko kukuthi, uLwesine.
Inkampani yaseMzantsi Korea ayifuni ukwandisa ubuqili malunga nomhla wokuboniswa kwayo kwaye malunga nesixhobo abazakusibonisa sona. Sazi phantse yonke into ngenxa yokuvuza. Ngayiphi na imeko kunokwenzeka ukuba basothuse ngeenkcukacha ezithile kodwa iya kuba kwisoftware okanye nakwi-S-Pen, ekule Galaxy ngokuqhelekileyo yinkwenkwezi.
Nge-9 ka-Agasti sinesivumelwano kunye ne-Samsung
Ngaphandle kwamathandabuzo lixesha apho abaninzi bekwiholide kodwa eSamsung engachaphazeli nto kwaye njengonyaka kulindeleke ukuba intetho yesibini ebaluleke kakhulu kwinkampani Lawula zonke iindlela ezinokubakho, nge abachaphazelayo Yotube ngokwesiqhelo kwaye zonke iiblogi kunye namaphepha ewebhu alahlwe kugubungela. Ngokucacileyo kwiActualidad Gadget siza kuyilandela le ntetho kwaye sabelane ngayo nonke, nangona inokulandelwa ngqo kwiwebhusayithi yenkampani naphina emhlabeni.
Yonke into imiselwe ukuba ihlangane ngokusesikweni nemodeli entsha yeGlass Note 9, ngokungathandabuzekiyo i-phablet enoluhlu olude lwabalandeli kunye nabasebenzisi abayonwabelayo isixhobo esifana kakhulu noyilo kwi-Samsung Galaxy S9 thaca kwiNkomfa yeHlabathi yeFowuni kulo nyaka, kodwa ngezibonelelo ze-S-Pen kwaye ngaphezulu kwako konke ngescreen esikhulu. Sele sijonge phambili ku-Unpacked!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Isamsung yenza usuku olungasetyenziswanga ngokusemthethweni kwiGlass Note 9